Iyo Express Inotsiva uye mutsauko uripakati peyakagadziriswazve uye zvakajairwa iPhone | IPhone nhau
Imwe yedzakakosha tsika dzakawedzerwa dzekutenga kubva kukambani yeCupertino ndizvo chaizvo zvazviri technical service, mushure mekutengesa uye pamusoro pezvose zvinovimbisa. Aya ndiwo mabudiro anoita Apple kuvimbika kwakakosha kubva kune vashandisi vayo, uye ndiko kuzonyanya kudzokorora kana kuve vatengi vakasimba veiyo brand.
Tinoda kutsanangura izvo iyo Zvakanakira kukumbira chinotsiviwa chinotsiviwas uye zvakare kuziva ndeupi mutsauko uripo pakati peyakagadziriswazve iPhone, uye iPhone yakatengwa nenzira yechinyakare. Aya ndiwo maitiro kuActualidad iPhone isu tinoda kukubatsira iwe zvakare kuti iwe ugone kudzidza nezvekodzero dzako maererano newarandi yezvigadzirwa zveApple.
Ndosaka zvichikosha kuti tisiyanise zvikamu zviviri zvakakosha zvechinhu chatiri kuzokurukura nhasi, izvo zviri kusahadzika kunovapo nekugadzirisa garandi nekambani yeCupertino nekudaro tive nechokwadi chekuti tinogashira pfungwa izvo zvatinazvo. Isu tinoendako nezvakanyanya kukosha zvinhu zveApple Express Kutsiva kutanga.
1 Maitiro ekugadzirisa Apple Express Kudzosera
2 Chii chinonzi Kugadziridza iPhone uye kuti ungazviziva sei
Maitiro ekugadzirisa Apple Express Kudzosera
Chinhu chekutanga kuziva chii chinonzi apple expression kutsiva. Hatisi kugara tine Apple Chitoro padyo, kana isu hatina chete nguva yekufamba. Nechikonzero ichi, kubva pakutanga kuSpain (uye zvakare mune dzimwe nyika zhinji), Apple yanga ichipa yekugadzirisa sisitimu inonzi Express Kutsiva iyo ine chokwadi chekuti iyo North American femu inokutumira nerevhi yekutumira tsamba nyowani iPhone yakafanana neiyo terminal yauri kushandisa uye iri pasi pewarandi, pasina chikonzero chekuti iwe ubvise yako yazvino iPhone uye iri pasi pewarandi. Panguva iyoyo, uchagamuchira iPhone nyowani uye uchave nebasa rekutumira yako yakaremara iPhone kuApple's SAT kuburikidza neyekutumira mameseji iyo Apple yakambobhadharira iyo uye iyo iyo yaakakupa iwe nerutsva nyowani inodzivirira chishandiso .
Isu tichakubatsira iwe nemibvunzo, Ndingaite sei kukumbira kutsiva chaiko? Kusvikira nguva isiri yapfuura, Apple yakapa mukana wekukumbira chinotsiviwa kune chero mushandisi weApple anga ari mugore rayo rekutanga rewarandi kana anga awana iyo terminal kuburikidza nechitoro chepamutemo, nekuti izvi iwe waive nemikana miviri: Iva nemubati weApple Care. kana kubhadhara € 20 yekutakura kuti uenderere mberi. Nekudaro, sezvo angangoita 2017 Apple inongopa iyo yekutsiva sevhisi sevhisi zvachose mahara kune vashandisi vane Apple Care +. Kuti uikumbire, unofanirwa kubata rubatsiro rwekubatsira kuburikidza ne tauriranai kana kuburikidza runhare mune iyo mamiriro maitiro ekuunganidzwa kwedhata anotanga kuenderera nekutumira kweiyo nyowani terminal.
Paunenge wakumbirwa, kusahadzika kwakawanda kunotanga kubuda, Chii chiri ichi chinodzoreredzwa mutengo? Sezvatakambotaura, sevhisi iyi yemahara zvachose, zvisinei, Apple inoisa bata yako kiredhiti kadhi kiredhiti kuti uve nechokwadi chekodzero yekutora kana iwe uchiita chitsotsi kana kuti matambudziko asina kukonzerwa nekambani anoitika mukati mese maitiro. Mune ino kesi, chengetedzo ichaitwa pane yako kiredhiti kadhi iri pakati pe329 ne1469 euros zvichienderana neiyo terminal iyo yaunokumbira iyo inotsiviwa kutsiva, unogona kutarisa mitengo mune ino link uye uve nechokwadi, nekuti kweinenge vhiki iwe usaende kuti uwane mari iyi, iyo ichavhurwa nekukasira kana nzira yekutsiva yapera.
Ko kana iyo terminal yatinotumira isina kuvharwa neiyo yekutsiva sevhisi sevhisi? Zvinogona kuitika, sekutaura kwatakaita, kuti isu tinotumira iyo iPhone iyo semuenzaniso yakanyorova, kana iyo yakatambura netsaona kukuvara isingakonzerwe neApple technical technical service, mune iyo kesi, Apple ichatibhadharisa pakati pe221 ne641 euros mune pfungwa ye kutsiva kweiyo terminal yeiri kunze-kwe-yewaranti sevhisi kune avo Apple Care + vashandisi, kuti tikwanise kuchengeta iyo terminal iyo yatumirwa kwatiri uye nzira yekugadzirisa ichavharwa.
Ini ndinotora nguva yakareba sei kudzorera iyo isina kunaka iPhone uye chii chinoitika kana ndikanonoka? Izvo zvakakosha kuti uzive kuti isu tichava nemazuva gumi ebhizinesi ekudzosa iyo yakaremara iPhone sezvo isu tagamuchira iyo yekutsiva iPhone, zvikasadaro, Apple inozoshandisa chirango mari yekunonoka kudzoka pakati pe85 ne515 euros zvichiteerana mukuenderana nerudzi rwechigadzirwa yatiri kukumbira manejimendi manejimendi. Kuti tidzorere chakaremara iPhone isu tinofanirwa chete kuiisa mubhokisi yatinotumirwa naApple, tinyore nezvimiti chena zvakaiswa mubhokisi uye riise muhombodo yatinozoisa chisimbiso, tobva tazobatana nekambani yekutakura iyo Iye. akatipa iyo yekutsiva iPhone kuitira kuti vagokwanisa kutora iyo nyowani nyowani.
Zvinotora nguva yakareba sei kuti Apple ivhure iyo inobata? Kazhinji, nekuda kwekuti sevhisi inoitwa kuburikidza nekutumira mameseji, iyo iPhone isina kukwana inosvika kuApple SAT zuva rinotevera mushure mekunge tatumira, uye gare gare vachazoenderera mberi nekuiongorora kuti vaone kuti inoenderana ine garandi zviyero Apple kugumisa kugadzirisa uye kuenderera nenzira iyi nekuvhurwa kwekuchengetwa pakadhi redu rechikwereti. Naizvozvo, maitiro aya anowanzo kuve pakati pe48h ne72h zvichienderana nekunaka kwenyanzvi yekugadzirisa.
Chii chinonzi Kugadziridza iPhone uye kuti ungazviziva sei
Iyo Yakagadziridzwa kana Yakagadziriswazve iPhone iri chinongedzo icho zvinoenderana nekambani yeCupertino hachina kupfuudza iwo emhando yepamusoro kana chinouya kubva pakudzoka Iyi terminal inovhiringidzika uye kugadzirirwa, ichitsiva zvachose chero chikamu chingave nechisikigo chemuviri kupfeka, kuchengeta zvakakosha, asi kubvisa mune zvese zviitiko zvinhu zvakaita sebhatiri kana iyo skrini. Ipapo aya matemu anodzokera kuketani yeApple yekugadzira, nokudaro achipfuudza iwo mamwe madhiraivhu uye achienderera mberi achiendeswa kune vashandisi vane matambudziko ehunyanzvi hwebasa iro rakaoma kugadzirisa kana iro rinosanganisira mazuva mazhinji ekumirira. Izvo zvinowanzoitika kuti kana iwe ukaonekwa kune yeGenius Bar ine dambudziko risingazivikanwe asi rakajeka, chako chinokanganisa chiteshi chinobviswa uye chigadziridzo chakagadziridzwa chinounzwa kwauri mubhokisi jena. Aya matemu anounzwa pasina zvishongedzo zvakaita sechaja kana tambo, iyo yakavhurika terminal inongopihwa mubhokisi chena iyo ichavhurwa nemushandisi uye neiyo serigraphy yeiyo IMEI uye serial nhamba.
Zviri nyore kuziva kana isu tiri pamberi pechiteshi Yakagadziridzwa, nekuda kweizvi isu tinofanirwa kuisa Zvirongwa> Zvimwe> Ruzivo uye tichaenda kuchikamu Muenzaniso. Tsamba yekutanga iyo zita remazita rinotanga inotsanangura kuti ndechipi chiteshi chatiri kushandisa:
«M»: ndiyo tsamba inozoburitsa kuti iyo terminal ndeye nyowani nyowani
«F»: chichava a yakadzorerwa unit; Apple yakadzorera iyo.
«P»: iri tsika yuniti; Kureva, rakanyorwa nechekumashure
«N»: ari chinja chinzvimbo iyo inoendeswa kumushandisi nekuti basa rekugadzirisa rakakumbirwa, semuenzaniso
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Iyo Express Kutsiva uye mutsauko uripakati peyakagadziriswazve uye zvakajairwa iPhone
Chinyorwa chakanaka kwazvo; zvisinei ndine mubvunzo, Apple Care + inotengeswa kuSpain here? Mazuva mashoma apfuura kuApple vakandiudza kuti zvinongopihwa muApple Care.
Ndine imwe yakadzokororwa iyo yavakandipa mubhokisi jena kuchinjana neyangu kuApple Store muPuerta del Sol uye inotanga naM.